2012-10-06 08:48:38 | मेरो सिन्धु
नेपाली जनताले अहिले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्त गरेका छन् । तर त्यसलाई आफ्नो सरोकारको बिषयमा भरपुर प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि कसरी जनतामा सूचनाको पहुँच पूर्ण रुपले पुर्‍याउने र त्यो पहुँचलाई आफ्नो अधिकार र न्याय प्राप्तिको पक्षमा प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयलाई ध्यानमा राखेर केही अभियानहरु सुरु गर्ने सोचमा छौं ।
त्यस्तै सिन्धुपत्रकारितामा सक्रिय क्रान्तिकारी पत्रकार संघका क्रियाशील साथीहरुलाई थप व्यवसायिक बनाउँदै जनपक्षीय, दिगो र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि तालिम, प्रशिक्षणलगायतका कार्यक्रमहरु गर्नेछौं । त्यसका साथै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारका बिषयहरुमा पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य भाइचारा संगठनहरु सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने योजनामा छौं ।
जिल्लाको पत्रकारिताको अवस्थालाई चाहिं कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
जिल्लामा पत्रकारितामा निकै नयाँ आयामहरु थपिएको छ । प्रकाशनहरुको अवस्थालाई हेर्दा यो उत्साहपूर्ण पनि देखिएको छ । अनलाइनको पनि विकास भइरहेको छ । नयाँ पुस्ता निकै जागरुक भएर पत्रकारितामा आएको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारिताको विकासका लागि निकै सकारात्मक कदम चालिरहेको छ । तर पनि दिर्घकालीन सोच, लगानीको पारदर्शीता, व्यवसायिक ज्ञान आदि अभावका कारण यसको भविष्यप्रति अझै सुनिश्चित हुन सकिने स्थिति भने छैन । यो उत्साहलाई जोगाउन सबै पत्रकार साथीहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यसका लागि क्रान्तिकारी पत्रकार संघले पनि आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
पार्टीपिच्छेका पत्रकार संघ संगठनहरु छन्, यसले पत्रकारहरुलाई विभाजित गरेका छैन र ?
मलाई बिल्कुलै त्यस्तो लाग्दैन । पत्रकार पनि आम नागरिककै प्रतिनिधि भएको हुनाले उसको पनि कुनै न कुनै आस्था हुन्छ । त्यही आस्थाको आधारमा कुनै संघ संगठनमा आबद्ध हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर पत्रकारितालाई जनपक्षीय बनाउने, व्यवसायिक बनाउने बिषयमा र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कुनै पनि फरक धारणा छ भन्ने मैले महसुस गरेको छैन । त्यस्तै सबै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघप्रति हामी सबैको सम्मान र सहभागिता छ । आस्था जुन भएपनि पत्रकारको मूख्य कर्म पत्रकारिता हो, त्यसैले त्यसको सारमा केही फरक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तर महासंघमा त तपाईहरुको उपस्थिति निकै नै कम छ नि ?
हामी दशबर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमीबाट आएको पार्टीमा आस्था राख्ने पत्रकारहरु भएको कारण महासंघको सदस्य बन्ने, कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने कुरामा कमी भएकै हो । त्यसको प्रमुख कारण त हामीले पार्टी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म महासंघमा सहभागिता हुने प्रक्रियामा ध्यान नदिनु नै हो । त्यस्तै कतिपय सन्दर्भमा अन्य आस्थाका साथीहरुले हामीलाई अलि फरक नजरले हेरेको अनुभूति पनि नभएको होइन । तर पछिल्लो समयमा यस्तो बुझाई अन्त्य हुँदै गएको छ । पत्रकार महासंघको केन्द्रमा बनेको संरचनाले पनि त्यसलाई निकै भत्काएको छ । अब त्यस्तो समस्या आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । सदस्यताको हिसाबले हाम्रो अहिले उपस्थिति कम रहेपनि महासंघका सबै कार्यक्रम र अभियानमा हाम्रो सक्रिय सहभागिता छ र रहनेछ । त्यस्तै अब प्रक्रिया मिलाएपछि सदस्यकै हिसाबले पनि हाम्रो उपस्थिति जोडदार हुनेमा कुनै शंका छैन ।
महासंघले तपाईहरुलगायत कतिपय सक्रिय पत्रकारहरुलाई पनि सदस्यता नदिएको आरोप पनि सुनिएको थियो नि ?
मैले अघि पनि भनें, त्यसमा कतिपय प्रक्रियामा ध्यान नदिनु हाम्रो कमजोरी हो भने युद्ध लडेर आएको पार्टीमा आस्था राख्ने भएका कारण कतिपय साथीहरु आशंकित भएर अर्कै नजरले हेर्नुले पनि हो । तर मलाई विस्वास छ अब त्यस्तो हुने छैन ।
अन्त्यमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला महान सहिद कञ्चन प्रियदर्शीजस्ता आदर्श पत्रकारहरुको जिल्ला हो । त्यो आदर्शलाई पत्रकारितामा जिवीत बनाइराख्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौति हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाटोमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ सदैव सक्रिय रहनेछ । त्यसैगरी जनतालाई शक्तिशाली बनाउनका लागि जनतासमक्ष सूचनाको पहुँच पुर्‍याउन हाम्रो संघका सदस्यहरु गाउँ, टोल र क्षेत्र सबैतिर क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँहरुको साथ लिएर सूचनालाई आफ्नो अधिकार र न्यायको लागि प्रयोग गर्न सम्पूर्ण जिल्लावासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु । त्यसका साथै जिल्लाको पहिलो पत्रकारको रुपमा परिचित पत्रकारिताको विरासत तथा ऐतिहासिक व्यक्तित्व इश्वरीमान श्रेष्ठको गत महिनामात्रै निधन भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा–सुमन अर्पण गर्दछु ।
धनेबाद तपाइलाई हजुर को करिया कालमा जनता को साथ सफल होस् Thankuu
- ravi kumar bardewa : irkhu 7hal k.s.a
Seems very good starting is the best things which u've done so it is my request n advice that their are very poor n lack up from communication in our district for example Piskar vdc is the one of them so, if possible please do start get in touch with the mentioned vdc's people for more information n for more support...thanks n keep it up mr.Kala Anuragi g
- Abshar Shakya : Jaljale-03 Piskar Sindhupalchok